Imibuzo nezimpendulo › Yini igobongo?
MaZet asked 4 months ago
Makho answered 4 months ago
Igobongo izinkamba , ezigeza umuntu nabakubo, if amadlozi bengakhanyi igobongo likhonela lokho ukukhanyisa , ziba mbili izinkamba elomndiki elomndawo ulihla 3 months.
Mamlambo answered 4 months ago
Igobongo izimpande zezihlahla noma imithi ekhethekileyo ekungukudla kwedlozi. Imimoya njengoba iyahlukene nje kanjalo nezimpande zehlukene ngokwemimoya ukuthi moya muphi udla yiphi ukuze uphakama noma uhlambuluke.
Igobongo lidlawa ngobani?
Igobongo lidliwa uwowonke umuntu, alikhethile ngokuba imimoya idla lona ukuze ivule izinhlahla, Noma kungayimimoya ejwayelekile noma eyomsebenzi. Akusho ukuthi uma udla igobongo, usuyathwasa noma usiyisangoma. Igobongo ulidlela ukuthi izinto zakho Kanye namadlozi akusingathile ahlambuluke.
Igobongo liyizimpande ezinhle, uma ulidle kahle igobongo lakho uyazibona izithelo salo masishane. Igobongo lifana nayo yonke ke imithi, liyahlonishwa ngenkathi lidliwa; 1. Awulali nomuntu ngokocansi uma udla igobongo. 2. Awulidli uma ungowesifazane ungena esikhathini awulidli uze uphume esikhathini. 3. Alidliwa igobongo nabangani, ngamanye amazwi awulicaphuneli omunye umuntu. 4. Awulidli igobongo ingekho ingubo emhlophe ozoyimbatha emahlombe noma ingubo yamandla. Lokhu usuke uhlonipha izidalwa. 5. Awulidli igobongo makuthanda wena, ngokuba linabanyikazi balo. Into yedlozi nanoma yiliphi uyenza uthanda noma ungathandi.
Lidliwa kanjani igobongo nah?
Uthenga ibhakede elimuhlophe, izibani ezimbili kuya nokuthi libonakale ukuthi ulidlele muphi umundeni wakini noma wakonyoko. Faka amanzi agcwale ebhakedeni bese ufaka izimpande zehobongo. Ukhe induko yokuliphahla, ngenkathi ulidla igobongo ufaka lengubo emhlophe emahlombe noma eyamandla, khanyise izibani zakho bese uyaliphahla igobongo lakho kuvele ingwebu emhlophe ube ukhuluma nabo ucele okucelayo yobe usuyihabula bese uyigcobisa. Kothi musuqedile ushaye izandla kabili bese uyalimboza ngecansi lime icansi igobongo libe phakathi nendawo. Kanjalo uma uzolidla ushaya izandla kuqala phambi kokuba ususe icansi ulidle.
Igobongo lidliwa ngalezi zikhathi ; ekuseni ngabo 6am, emini (uma ungasebenzi) ngabo 12 bese ntambama ngabo 6pm. Uyageza ngegobongo, uchathe, phalaze,ugqume. Igobongo liyahlala isikhathi eside kothi masulishaya ubone ingwebu isingakhuphuki. Uyalithatha ulisefe lonke uphalaze noma ugeze ngalo. Bese kuthi izimpande uzifafaza egcekeni. Awuzilahli emugqomeni.